वेबसाइटको नाम कसरी राख्ने ? – Nepali Tech Blog
Home → कसरी गर्ने
सोचे जस्तो वेबसाइटको नाम पाउँनु अब कम्ता अफ्ठ्यारो छैन । अंग्रेजी सजिला शब्दहरुका प्राय पहिले नै वेबसाइट बनिसकेका छन् या त कसैले पहिले किनेर बेच्न राखिसकेको छ । कति नामहरुको लागि त हजारौँ डलर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । हामीले सुरु गर्ने ब्लग तथा साइटहरु केहि हजार नेपाली बजेटका हुन्छन् सामान्यतया । यती बजेटमा ति हजारौं डलर मुल्यका डोमेन नामहरुको कुरै नगरौँ । यहाँ हामी औसत मुल्य पर्ने नामहरु कसरी राख्ने र कसरी किन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ ।
डोमेन नाम (Domain Name) भनेको के हो ?
सामान्यरुपमा बुझ्ने हो भने डोमेन नाम भनेको ब्लग तथा वेबसाइटको नाम हो । यो नाम आफ्नो बनाउँन शुल्क तिरेर दर्ता गराउँनु पर्छ । एकपटक दर्ता गरे पछि सँधै भरिका लागि आफ्नो भइरहने भने होइन । तपाईले शुल्क बुझाए अनुसारको अवधिका लागि डोमेन तपाईको हुन्छ । जस्तै – यो ब्लग नेपालीटेकब्लग हो । यो यसको नाम हो । एक पटक यसको वेब ठेगाना हेर्नुहोस् त, www.nepalitechblog.com । यसैले यसको डोमेन nepalitechblog.com हो । एउटै नामका धेरै डोमेनहरु हुन सक्छन् किनभने उही नाममा बेग्लै टिएलडी (नामको पछाडिको डट वा थोप्लो पछाडि आउँने शब्दहरु जस्तै कम, नेट, ओआरजी आदिलाई टप लेभल डोमेन वा टिएलडि भनिन्छ ।) थपिएर अर्कै डोमेन बन्छ । nepalitechblog.net, nepalitechblog.info, nepalitechblog.me, nepalitechblog.org आदि यस्ता सयौँ डोमेनहरु यही nepalitechblog भन्ने नामबाट बन्न सक्छन् । यसैले डोमेन भनेको यही नाम मात्रै पनि होइन ।
वेबसाइट वा ब्लगको नाम कसरी राखिन्छ ?
सामान्यतया, वेबसाइट वा ब्लगको नामाकरण दुई प्रयोजनमा आधारित भएर गरिन्छ । पहिलो, नामलाई ब्रान्ड बनाउँने । कुनै पृथक शब्द लिएर त्यसलाई आफ्नो ब्रान्डका रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । जस्तै: मेरो अर्को ब्लगको नाम मैले पानीफोटो डट कम राखेको छु । यसमा पानीफोटोले ठ्याक्कै यही किसिमको ब्लग हो भनेर संकेत गर्दैन । तर पानीफोटोका पाठकहरुले यसमा यस्ता किसिमका लेखहरु हुन्छन् भनेर विस्तारै स्विकार्न थाल्छन् । र, पानीफोटो डट कम एउटा ब्रान्ड बन्छ । दोस्रो, गुगलमा खोजिने शब्दहरु जोडेर । यसमा ब्लगर तथा वेबसाइट निर्माताहरुले बढि सर्च गरिने शब्दहरु मिलाएर डोमेन नाम लिन्छन् । जस्तै: how-to-create-a-blog.com, earn-money-online.com आदि । नेपालीमा भने यसलाई प्रयोग गर्न केहि असजिलो हुन्छ ।
कस्तो नाम राख्ने ?
मैले अघि नै भनिसके, अंग्रेजी सजिला शब्दहरुका प्राय पहिले नै वेबसाइट बनिसकेका छन् या त कसैले पहिले किनेर बेच्न राखिसकेको छ । यसैले भनेको नाम पाउँन एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाली सजिला शब्दहरुका पनि धेरै ब्लग बनिसकेका छन् । तर केहि समय अध्ययन र खोजी गर्ने हो भने नेपाली राम्रा राम्रा शब्दहरु पाउँन सकिन्छन् । तर नाम राख्दा केहि कुराहरु भने याद गर्नु पर्छ ।
१. डोमेन नामले वेबसाइटको उद्देष्य बुझाओस् : मान्छेले वेबसाइटको नाम सुन्ने बित्तिकै यो वेबसाइट यो प्रयोजनका लागि रहेछ भन्ने थाहा पाए भिजिटर बढाउँन सहयोग पुग्छ । जस्तै: यो ब्लगको डोमेन nepalitechblog.com हो । अब यसको नाम सुनिसके पछि जो सुकैले अनुमान लगाउँन सक्छ कि यो प्रविधि सम्बन्धि नेपाली ब्लग हो ।
२. नाम याद रहने हुनु पर्छ : डोमेन नाम एक पटक सुन्दा याद रहने किसिमको भए अति नै राम्रो हुन्छ । यसका लागि नियमित प्रयोग हुने शब्दहरु खोज्न सकिन्छ ।
३. हिज्जे सकेसम्म प्रस्ट होस् : डोमेन नाम राख्दा हिज्जे वा स्पेलिङको निकै याद गर्नु पर्ने हुन्छ । अझ नेपाली नाममा त यस्को ठुलो महत्व हुन्छ । हिज्जे बिगारेर नाम राख्दा भिजिटर अर्को पटक आउँदा अर्कै वेबसाइटमा पुग्ने सम्भावना बढि हुन्छ । याद राख्नुस्, हिज्जे नबिगारेकै भएपनि एउटै नेपाली शब्दका फरक फरक स्पेलिङ हुन सक्छ । जस्तै नेपाली शब्द आशाको स्पेलिङ हेर्नुहोस् त, aasa, aasha, aashaa, aasaa जे पनि हुन सक्छ । यस्ता शब्दहरुको हिज्जे सम्झिन गाह्रो हुन्छ तपाईको वेबसाइटका प्रयोगकर्तालाई ।
४. किवर्डको मुल्य : गुगल किवर्डमा गएर आफ्नो डोमेन नामको मुल्य कस्तो छ ? महिनामा कति मानिसहरु यसलाई खोजी गर्छन् जस्ता कुरा पनि तपाईले थाहा पाउँन सक्नुहुन्छ । बढि सर्च गरिने र महगाँ किवर्डहरु तपाईको व्यवसायिकतामा निकै ठुलो भुमिका निभाउँछन् ।
५. तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ : हो, ब्लग र वेबसाइटलाई आधुनिक लोकतन्त्रका आधार र माध्यम दुबै मानिन्छ भने तपाईको डोमेनको नाम माथिका ४ वटा बुँदामा बाँधिएको हुनुपर्छ भन्ने पनि कुनै अनिवार्यता हुन्न । तपाई आफ्नो मनले चाहेको नाम छान्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । कुनै पनि शब्द वा नामलाई लिएर तपाईले त्यसलाई आफ्नो ब्रान्ड बनाउँन सक्नुहुन्छ ।
नाम कहाँ र कसरी दर्ता गर्ने ?
डोमेन नाम राख्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहनु भएको डोमेन दर्ता गर्नका लागि उपलब्ध छ कि छैन भनेर जान्नु पर्ने हुन्छ । डोमेन उपलब्ध छ कि छैन भन्ने खोजी गर्न र दर्ता गर्नका लागि धेरै साइटहरु छन् । तर म यसका लागि गोड्याडी डट कम (Godaddy.com)* (*यो एफिलियट लिंक हो । यसमा क्लिक गरेर डोमेन दर्ता गर्दा तपाईले ३५ प्रतिशत छुट पाउँनु हुनेछ ।) लाई सिफारिस गर्छु । यसमा गएर तपाईले डोमेन सर्च गर्नुहोस् । र, उपलब्ध भएको डोमेनलाई दर्ता गर्नुहोस् ।
डोमेन उपलब्ध छ कि छैन खोज्न यो लिंकमा क्लिक गरेर तलको तस्विरमा झै डोमेन सर्च गर्नुहोला ।
डोमेन लिनका लागि इन्टरनेटमा पैसा तिर्न पेपाल वा मास्टर कार्ड नभएर हैरान हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् ।
ganesh karki – who has written 32 posts on Nepali Tech Blog.
do not miss latest गोड्याडी
एन्ड्रोइड मोबाइलमा नेपालीलाई काम लाग्ने एप्लिकेसनहरु
hari prasad nepali August 14, 2017 at 6:01 am
यहाँसम्मको धेरै ज्ञानमुलक जानकारकिो लागि धन्यवाद । अव रजिष्टर चाहीँ कसरी गर्ने र वेव डिजाईन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यसैगरी सजिलोसंग पढ्न पाउँ ।